गौर भन्सारको राजस्व संकलन ५६% बढ्यो
रौतहट (अस) । गौर भन्सार कार्यालय रौतहटले गत आव लक्ष्यभन्दा ५६ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयले गत आवमा रू. १८ करोड ९२ लाख ५८ हजार राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको रू. २९ करोड ५५ लाख ९८ हजार संकलन गरेको हो । गत आवको करीब ५ महीना गौर भन्सार कार्यालयबाट कोइला आयात भएपछि राजस्वमा टेवा पुगेको कार...
माधवनारायणमा अनियमितता भएको आरोप, नगरप्रमुखसहित उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी
साउन १४, रौतहट (अस) । रौतहटको माधवनारायण नगरपालिकामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ । कानूनी प्रक्रिया पुरा नगरी अनियमितता गरेको आरोपमा नगरप्रमुख विरेन्द्र राय यादव, उप–प्रमुख सिमल साह तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रलब कायस्थ विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी...
रौतहटमा बजेट खर्च उत्साहजनक
रौतहट । रौतहटमा गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि संघ र प्रदेशबाट प्राप्त बजेटको खर्च अवस्था उत्साहजनक देखिएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटका अनुसार सो अवधिमा संघ र प्रदेशको कुल बजेट खर्च ९० दशमलव १४ प्रतिशत रहेको छ । संघबाट प्राप्त बजेटको चालूतर्फ ७ अर्ब ५० करोड ३० लाख र पूँजीगततर्फ १...
घूससहित मालपोतका नायब सुब्बा पक्राउ
साउन १३, सिरहा। भूमिसूधार तथा मालपोत कार्यालय सिरहाका नायब सुब्बा र लेखापढी व्यवसायीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले सोमवार पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा कार्यालयका नायब सुब्बा मिथिलेश्वर ठाकुर र बरियारपट्टि गाउँपालिका ३ का लेखापढी व्यवसायी राजवंशी चौधरी रहेको अख्तियारका टोली...
चर्को भाडाका कारण जनकपुरका व्यावसायी पलायन हुने अवस्थामा
साउन १३, जनकपुरधाम । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका सौन्दर्य सामग्री व्यावसायी चन्दन भगतलाई गत एक वर्षदेखि पसलको भाडा तिर्न धौ–धौ पर्दै आएको छ । एक वर्षअघिसम्म उनको व्यवसाय पनि राम्रो थियो तर नयाँ ठाउँमा पसल सार्नु पर्दा मन्द व्यापार र चर्को भाडाले गर्दा पसल नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएक...
बाढीबाट ज्यान र सरसामान जोगाउन डुंगाको जोहो गर्दै पीडित
साउन १३, राजविराज (अस) । बाढी आइसकेपछि ज्यान, सरसामान, बालबालिका, वृद्धवृद्धालाई जोगाउनका लागि सप्तरीका बाढीपीडितले अहिले डुंगाको जोहो गर्न थालेका छन् । बस्तीमा बाढी पस्दा सुरक्षित एवम् अग्लो स्थानमा एकैसाथ पुग्न सकिने गरी ठूला डुंगाको व्यवस्था गर्न यहाँका स्थानीय जुटेका हुन् । तिलाठी कोइलाडी गाउ...
बाढी तथा डुबानबाट रू.३ अर्बभन्दा बढीको क्षति, खाद्यान्न अभाव हुने अनुमान
साउन १२, रौतहट(अस) । यस जिल्लामा बाढी तथा डुबानबाट धानबालीमा क्षति भएपछि यस बर्ष खाद्यान्न अभाव हुने अनुमान छ । बाढीका कारण रौतहटमा १६ हजार हेक्टरमा लगाइएको धानबालीमा क्षति पुगेको छ । १८० हेक्टरमा लगाइएको धानको ब्याड तथा ३१० हेक्टरमा लगाइएको चैते धानमा बाढीले क्षति पुर्‍याएको छ । बाढी तथा डुब...
कमजोर तटबन्धले सधैं त्रास
रौतहट (अस) । रौतहटमा बाग्मती तथा लालबकैया नदीको तटबन्ध मर्मत नहुँदा स्थानीय त्रस्त बनेका छन् । बाढीले बगाएको तटबन्ध मर्मतका लागि सम्बन्धित निकायले चासो नदिएपछि नदी आसपासमा सधैं जोखिम हुने गरेको छ । नदी आसपासका गौर नगरपालिका, इशनाथ नगरपालिका, दुर्गाभगवती गाउँपालिका लगायतका अधिकांश स्थानीय त...
जनकपुरधाम विमानस्थलमा हवाई इन्धन भर्ने सेवा प्रारम्भ
साउन १०, जनकपुर । नेपाल आयल निगम लिमिटेडद्वारा शुक्रवारदेखि जनकपुरधाम विमानस्थलमा हवाई इन्धन भर्ने केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । हवाई इन्धन भर्ने सेवा उपलब्ध नभएका विमानस्थलमा इन्धन भर्ने सेवा विस्तार गर्दै जाने योजनाअनुरूप निगमद्वारा जनकपुरधाम विमानस्थलमा सो केन्द्रको स्थापना गरिएको हो । उद्यो...
बाढीले पुलहरूमा क्षति
राजविराज (अस) । अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले पूर्व–पश्चिम लोकराज मार्गका १ दर्जनभन्दा बढी पुलमा क्षति पुगेको छ । पहिले नै जीर्ण पुलहरूमा बाढीले पुर्‍याए पनि जोखिमपूर्ण रूपमा सवारीसाधन चलेका छन् । सप्तरीको कल्याणपुर बिसनपुरचोकस्थित चापिन र खडक खोला पुलमा बाढीले क्षति पुर्‍याएको छ । चा...